Jaaliyada iyo Ururada Bulshada DDSI ee Ka Dhisan UK oo Shir Balaadhan Isugu Timid Ku Saabsan Diyaargarawga iyo Qabanqaabada Xuska Hidar 29 - Cakaara News
LONDON - ka dib iyo intii ay isbedeladu ka dhaceen hogaankii jaaliyada dawlada deegaanka soomaalida itoobiya ee ka dhisnaa UK Waxaa la dardargeliyay Geedisocodka waxqabadkii Qarameed ee laga sugayay iyo Doorkii Soomaalida Itoobiya ay ku lahayd Maqaamka Reer Itoobiya sida Doorarkii ay ka Qaateen Biyo-xidheenka wabiga abay.
Hadaba Waxaa habeenkii Khamiistii ee tariikhdu ahayd 13-kii bishan ka dhacay safaarada dalka Itoobiya ee boqortooyada Ingiriiska shir aad u balaadhan oo ay ka soo qaybgaleen gudida fulinta jaaliyada, madaxda safaarada, lataliyaha madaxweynaha iyo dad kale oo magac ku leh jaaliyada DDSI ee boqortooyada Ingiriiska.
Gudoomiyha jaaliyada ee DDSI ee Britain, Dr Nuur Xuseen, ayaa dadkii shirka ka soo qaybgalay uga waramay sida ay jaaliyadu doonayso in ay uga qaybqaatado xuska maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo sanadka lagu qaban doono Jigjiga oo ah xaruunta Ismaamulka Soomaalida.
Gudoomiye Nuur ayaa xusay in ay jaaliyadu martiqaaday dhamaan jaaliyadaha qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya ee ku dhaqan Ingiriiska si ay ugu baraarujiyaan maalintan weyn oo mudnaan gaar ah sanadkan u leh Soomaalida ku nool Itoobiya.
Nuur ayaa ku nuuxnuuxsaday in jaaliyada DDSI ay soo bandhigi doonto waxyaabo badan oo la xidhiidha dhaqanka, hidaha iyo taariikhda Ismaamulka Soomaalida.
Safiirka dalka Itoobiya ee Britain, Berhene Kebede, ayaa dhankiisa ka sheegay in maamulka safaradu soo dhaweynayo go'aanka jaaliyada islamrkaana ay si buuxda u taageerayaan. Safiirka ayaa muujiyey in maalinta qoomiyaduhu tilmaamayso siniinta qoomiyadaha dalka iyada oo lagu faanayo kala duwanaansha qoomiyadaha kala duwan ee wadanka.
Safiirka yaa sidoo kale si kooban uga warbixiyey warbixino la xidhiidha waraaqaha aqoonsiga ee la siiyo dadka asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya ee ku dhaqan qurbaha iyo guryo loogu talagalay in qurbajoogta Itoobiya qiimo jaban lagaga iibiyo si loogu dhiirigaliyo in ay dalka maalgashigiisa ka qaybqaataan.
Danjiraha ayaa sheegay in markii la dhamaystiro xogaha la xidhiidha arrimahan jaaliyadaha lala socodsiin doono.Waxaa isna goobta shirka hadal kooban ka soo jeediyey Lataliyaha madaxweynaha DDSI ee dhanka qurbajoogta iyo maalgashiga, Maxamuud Xaaji. Latilayaha ayaa dulmaray siyaasada DDSI ee ku aadan qurbajoogta iyo maalgashiga iyo guud haan xaalada dalka.
Sidoo kale, waxaa la taliyuhu ifiyey fursadaha maalgashi ee ka jira dalka oo idil, gaar ahaan Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Maxamuud Xaaji ayaa sheegay in uu jaaliyada iyo safaardaba u fariin iyo boogaadin gaar ah uga sido madaxweynaha DDSI, Cabdi Cumar. Waxaa uu intaa ku daray, in jaaliyada UK kamid tahay kuwa qiimaha gaarka u leh DDSI.
Shirkan oo ay qayb libaax ka qaateen ururka haweenka iyo ka dhalinyarada DDSI ee fadhigoodu yahay cariga Ingiriiska ayaa lagu soo afjaray la iskuna waafaqay in si buuxda looga qayb qaato xuska maalinta qoowmiyadaha iyo Shucuubta Itoobiya oo dhawaan markii 1aad ka dhici doonta Xarunta Dawlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya Hidar 29 ama 5-ta bisha December ee fooda inagu soo haysa.